Rooble iyo waxa uu ku soo arkay Magaalada Jowhar (SAWIRRO) | Dhacdo
Home Wararka Maanta Rooble iyo waxa uu ku soo arkay Magaalada Jowhar (SAWIRRO)
Rooble iyo waxa uu ku soo arkay Magaalada Jowhar (SAWIRRO)
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Maxamed Xuseen Rooble oo maanta booqday Magaalada Jawhar ayaa sheegay in xaaladda baniaadanimo ee ka dhalatay fataahadda Webiga Shabelle, ay u baahan tahay in wadajir loogu istaago, sidii loo samatabixin lahaa dadka dhibaateysan.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa kormeeray goobaha ay saamaynta xoogan ku yeesheen fatahaadaha Webiga Shabelle iyo goobaha ay shacabka ku barakaceen, isagoo Madaxda Dowlad Goboleedka Hirshabelle kala hadlay, sidii dadaalada haatan socda loo xoojin lahaa, loona dhameystiri lahaa qorsheyaasha ku aaddan xal u helista dhibaatada soo laalaabatay.
“Runtii waxaan maanta indhahayga ku soo arkay wax aad u dhib badan. Waxaan arkay in Magaalada Jowhar iyo nawaaxigeeda oo dhan ay biyo fadhiyaan, ayna magaaladii kala go’doomiyeen. Fatahaaduhu waxa ay dhibaato u gaysteen dad masaakiin ah oo degan tuulooyinka uu maro Webiga Shabelle. Barakacyaashaasu maanta gacan ayay nooga baahan yihiin, haddii ay ahaan lahayd mid deegaameyn, mid raashin iyo mid caafimaadba.” Ayuu yiri Ra’iisal Wasaare Rooble.
Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa tilmaamay fatahaadaha soo noqnoqday in Xukuumaddiisu waqtiga u haray ay xoogga saari doonto, sidii loo dajin lahaa qorshe saxan oo looga hortagaayo fatahaadahan, loona heli lahaa xal waara oo lagu yareynayo dhibaatooyinka ay gaarsiiyaan dadka shacabka ah ee ku nool Hirshabelle, isagoona ugu baaqay bulshada ku nool hareeraha webiga in ay muujiyaan feejignaan dheeri ah.
Rooble ayaa bogaadiyay gurmadka iyo is-garab istaagga ay isu muujiyeen dadka deegaanka, taas oo kaalin mug leh ka qaadatay samata-bixinta nafeed ee qoysaska iyo dadkeenna nugul ee deegaannada ay dhibaatadu gaartay.
“Waxaan rabaa in aan ka codsado Shacabka Soomaaliyeed Gude iyo Dibad meel ay joogaanba in ay u istaagaan oo ay gacansiiyaan walaalahood Hirshabeelle, gaar ahaan tuulooyinkii ay dhibta gaarsiiyeen fatahaaduhu.Waxaan idinla qeybsanaynaa murugada iyo dhibka, annaga oo xoogga saareyna sidii aan uga qayb qaadan lahayn samata-bixinta qoysaska nugul ee ay soo food-saartay dhibaatadu.” Ayuu yiri Rooble.
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda ayaa waxaa socdaalkan ku wehlinayay xubno ka tirsan Labada Gole ee Dowladda Federaalka.
Previous articleRooble oo ku wajahan Magaalada Jowhar
Next articleDagaal qaraar oo ka dhacay Gobolka Shabellaha Dhexe